ဒုန္နယာလောကီစည်းစိမ်ကို ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်း2— Steemit
ဒုန္နယာလောကီစည်းစိမ်ကို ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်း 2steemCreated with Sketch.
myanmar-islam (10)in #myanmar •3years ago
ဒုန္နယာလောကီသက်တမ်းသည် ဇာတ်သဘင်ပွဲကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ယင်းရှုပ်ထွေးပွေလီသော လောကီဇာတ်ခုံတွင် အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဆိုးများဖြစ်သည့် မာန်မာန ထောင်လွှားခြင်း ၊ စိတ်ထားယုတ်မာခြင်း ၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း ၊ ရိယာ ပြစားခြင်း ၊ ပလွှားမောက်မာခြင်း ၊ လောဘကြီးခြင်း စသည့်တို့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပေသည်။ လူသားသည် ဒုန္နယာလောကီသက်တမ်းကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလိုစိတ် အလှအပခြယ်သလိုစိတ်များ ရင်တွင်း၌ ခိုအောင်းလာသောအခါတွင် ရှေ့နောက် အကောင်းအဆိုး ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတို့ကိုပင် မျက်ကွယ်ပြုကာ မတည်မြဲသော မွေ့လျော်မှုများဖြစ်သည့် လက်မှုအတတ်ပညာ ၊ လယ်ယာကိုင်းကျွန်း ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများကို လုပ်ကိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အတွင်းရော အပြင်ပါ ဒုန္နယာလောကီအတွက် သက်သက်ဖြစ်ရတော့သည်။ နှလုံးသားနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို ဒုန္နယာလောကီသက်တမ်းသည် ပန်းတိုင်မဟုတ် ခရီးဆောင်စားနပ်ရိက္ခာ ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမျှသာဖြစ်သည်။ ဒုန္နယာလောကီသက်တမ်းကို ဖန်ဆင်းရသည့် ရည်ရွယ်ချက်သည် အာခိရသ် တမလွန်ခရီးနှင်နေသူများ၏ လွယ်ကူမှုကို ရှေ့ရှု၍ ခရီး၏ အသုံးအဆောင်အဖြစ် ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အသိဥာဏ်ပညာမဲ့သူတို့သည် ခရီးဆောင်ပစ္စည်းကို ခရီးပန်တိုင်ဟု မှတ်ယူလိုက်ကြပြီး အလုပ်မျိုးစုံ ရမ္မက်ပေါင်းစုံတွင် မွေ့လျော်ရင်း နောင်တမလွန် အာခိရသ်ဘဝကို မေ့လျော့နေသည်။
ဒုန္နယာလောကီသက်တမ်းကို ပန်းတိုင်ဟု ထင်မှတ်ကာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူများသည် ဟဂ်ျ ပြုလုပ်ရန် အုပ်စုတစ်စုနှင့် ခရီးထွက်နေသူတစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တောထဲရောက်သောအခါတွင် ၎င်းစီးနင်းလိုက်ပါလာသော တိရစ္ဆာန်ကို အစာရေစာ ကျွေးမွေးရန် စိမ်းစိုသောနေရာတစ်ခုတွင် စခန်းချလိုက်သည်။ စိမ်းလန်းစိုပြေသော စားကျက်ကို မခွဲခွာနိုင်ဘဲ တိရစ္ဆာန်ကို အစာကျွေးရာတွင် လုံးပမ်းနေသောကြောင့် ခရီးဖော်များသည် ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြသော်လည်း နောက်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းကျန်ရှိနေခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၎င်းရည်ရွယ်၍ ထွက်ခဲ့သော ဟဂ်ျခရီး မအောင်မြင်တော့ဘဲ တောထဲတွင် ပိတ်မိနေတော့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် တောထဲ၌ တစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့သော ခရီးသည်နှင့် ၎င်း၏ တိရစ္ဆာန်ကိုပါ တောကောင်တို့က သတ်ဖြတ်ကာ စားသုံးလိုက်ကြတော့သည်။
ဤနည်းအတိုင်းပင် ဒုန္နယာလောကီသက်တမ်းသည် လောကုတ္တရာ အာခိရသ်သက်တမ်းအတွက် လယ်ယာကိုင်းကျွန်းပမာဖြစ်သည်။ ယာယီတည်းခိုစခန်းမျှသာဖြစ်သည်။ မိမိသည် မိမိ၏ မတည်မြဲသော ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် စီးနင်းလျက် တမလွန် အာခိရသ်ဘဝဘက်သို့ ခရီးနှင်နေသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ခရီးလမ်း၌ အသုံးဝင်မည့် မိမိနှင့် မိမိစီးနင်းလိုက်ပါလာသော တိရစ္ဆာန်အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် အစားအစာတို့ကိုသာ ယူဆောင်ပြီး ရှေ့ဆက်ခရီးနှင်သင့်သည်။ သို့မှသာ မိမိထာဝရနေရမည့် စခန်းသို့ ချောချောမောမော ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိမိနှင့် မိမိစီးနင်းလိုက်ပါလာသော တိရစ္ဆာန်အတွက် အမှန်တကယ် မလိုအပ်သောပစ္စည်း ၊ အစားအစာတို့ကို စုဆောင်းရာတွင် အချိန်ကုန်နေပါက ( မိမိနှင့်အတူ ချီတက်နေသူတို့က ပန်းတိုက်သို့ရောက်ကြပြီး မိမိက နောက်ကျန်ခဲ့ကာ ) ပန်းတိုင်သို့ ရောက်တော့မည်မဟုတ်ပေ။
” အာခိရသ် တမလွန်ခရီး နှင်နေသူများ ”
إن شآءاللّه تعالى
( ၃ ) တွင် ဆက်လက်ရေးသား တင်ပြပါမည်။
✍ Ⓐ̲ⓑ̲ⓤ̲ ̲Ⓐ̲ⓓ̲ⓔ̲ⓔ̲ⓑ̲ⓐ̲ⓗ̲
ရှမ်းပြည်သားလေး Sai Hak Khay
📆 ဟိဂ်ျရီ ၁၄၃၉ ၊ ရဂျဗ်လမြတ် ( ၂၈ )ရက်📆
📆 ၁၆ . ၄ . ၂၀၁၈ ( တနလာင်္နေ့ )📆
#steemit #religion #writing #esteem
3 years ago in #myanmar by myanmar-islam (10)